Protocol sy sakafo ho an'ny fifehezana ny tebiteby
27 Novambra 2021 27 Novambra 2021
Araka ny filazan'ny OMS dia efa ho 10% amin'ny mponina Breziliana no mitebiteby. Ara-dalàna ny mitebiteby alohan'ny fitsapana na zava-mitranga andrasana... Tohizo ny famakiana »Protocol sy sakafo ho an'ny fifehezana ny tebiteby
🔥Maro ny atiny: toro-hevitra manan-danja 9 alohan'ny hampiasana steroid anabolika
Raha efa nanapa-kevitra ny hampiasa karazana anabolika ho an'ny tanjona ara-esthettika na ara-panatanjahantena ianao, dia efa fantatrao fa misy… Tohizo ny famakiana »🔥Maro ny atiny: toro-hevitra manan-danja 9 alohan'ny hampiasana steroid anabolika
Huile essentielle Peppermint: Inona no firafitra? Inona avy ireo tombony azo? Mahafantatra bebe kokoa!
12 Febroary 2019
Mety ho nahatsikaritra ianao fa tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nitombo be ny fahalianana amin'ny zavamaniry fanafody any Brezila, na dia eo aza ny fitsaboana sy ny fanasitranana amin'ny alàlan'ny fitsaboana… Tohizo ny famakiana »Huile essentielle Peppermint: Inona no firafitra? Inona avy ireo tombony azo? Mahafantatra bebe kokoa!
Menaka ilaina amin'ny voasarimakirana: tombontsoa, ​​famoronana, fampiasana ary maro hafa!
8 Febroary 2019
Tsy vaovao na iza na iza fa ny voasarimakirana dia sakafo be otrikaina, feno vitamina ary tena ilaina amin'ny fahasalamana, sa tsy izany? Ary tsy… Tohizo ny famakiana »Menaka ilaina amin'ny voasarimakirana: tombontsoa, ​​famoronana, fampiasana ary maro hafa!
Ny tsimatimanota ambany: Antony, soritr'aretina, fitsaboana, sakafo ilaina ary maro hafa ...
7 Desambra 2018
Amin'ny fotoana iray eo amin'ny fiainanao dia tsy maintsy efa voan'ny viriosy, bakteria, na voan'ny fiparitahan'ny aretina ianao ... Tohizo ny famakiana »Ny tsimatimanota ambany: Antony, soritr'aretina, fitsaboana, sakafo ilaina ary maro hafa ...
Sucupira: Inona no ilana azy? Ny fomba fampiasana? Inona avy ireo tombony azo avy amin'izany?
Betsaka ny zava-maniry sy hazo misy fanafody, manampy amin’ny fitsaboana aretina isan-karazany sy hanatsarana ny fiainana, ka noho izany... Tohizo ny famakiana »Sucupira: Inona no ilana azy? Ny fomba fampiasana? Inona avy ireo tombony azo avy amin'izany?
Fihenan'ny hozatra: ny fampahalalana rehetra ilainao momba ny soritr'aretina sy ny fitsaboana!
Ny fihenjanan'ny hozatra dia ratra izay mety hisy fiantraikany amin'ny olona maro, ary matetika no mitranga indrindra noho ny fihenjanana tafahoatra ny fibra hozatra, ... Tohizo ny famakiana »Fihenan'ny hozatra: ny fampahalalana rehetra ilainao momba ny soritr'aretina sy ny fitsaboana!
Fanafody fanafody: fantaro ny fomba hanampiany anao hanatsara ny fahasalamanao!
Tena zava-dehibe tokoa ny fanafody voajanahary manampy amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana, satria na dia tsy misy porofo ara-tsiansa foana aza, dia afaka manampy amin'ny... Tohizo ny famakiana »Fanafody fanafody: fantaro ny fomba hanampiany anao hanatsara ny fahasalamanao!
Fomba fiaina mipetrapetraka: Antony, soritr'aretina, risika ary vokany ... Fantaro ny fomba hisorohana azy!
Ny fanaovana activités ara-batana no fototra iorenan’ny fiainantsika, na izany aza, ny isan’ny olona tsy manao na inona na inona... Tohizo ny famakiana »Fomba fiaina mipetrapetraka: Antony, soritr'aretina, risika ary vokany ... Fantaro ny fomba hisorohana azy!
Barbatimão: Jereo ny tombontsoa ara-pahasalamana rehetra an'ity zavamaniry ity!
Ny fahafantarana ny zava-maniry ho an'ny fitsaboana dia tena ilaina mba hahafantarantsika izay fanafody voajanahary azontsika itodika rehefa misy olana ara-pahasalamana. Izany no antony… Tohizo ny famakiana »Barbatimão: Jereo ny tombontsoa ara-pahasalamana rehetra an'ity zavamaniry ity!